समाजमा झाँगिदो नकारात्मक प्रवृत्ति - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home बिचार समाजमा झाँगिदो नकारात्मक प्रवृत्ति
आजकल नेपाली समाजमा एक प्रकारको नकरात्मक प्रवृत्ति झाँगिदै गएकोे छ । अरूले गरेको राम्रो रचनात्मक कार्यलाई नदेख्ने र अरूप्रति शुभेच्छा पनि नचाहने उल्टै भ्रम सिर्जना गर्दै हिँड्ने प्रवृत्तिले समाज संक्रमित भएको छ । यस्ता प्रवृत्तिलाई सकुुुुनि प्रवृत्ति भनिन्छ । जसले समाजमा शान्ति र विकासभन्दा अन्तरकलह वृद्धि गर्छ र परिणामतः विकासको गति अवरुद्ध हुन पुग्छ । आज त्यही नियति भोग्न समाज बाध्य छ । राज्यको पनि समय छउन्जेल राष्ट्रिय मुद्दामा गम्भीर भई छलफल नगर्ने अनि समयले नेटो काट्न लाग्दा महŒवपूर्ण निर्णय गर्ने परिपाटी पहिलेदेखि रहँदै आएको छ र अझै पनि राज्य चरित्र त्यही नै देखिन्छ । सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता भन्ने कुरा एकादेशको कथा हुन थालिसक्यो । संवेदनशीलता हराइसक्यो बरु उल्टो अझ क्रुरतातर्फ समाज उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ । यसले नेपाली समाजलाई कुन दिशातर्फ लगिरहेको छ ? सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
हामी बसिरहेको समाज भनेको हिजोको समाज हो । जुन समाजमा ठूला अपेक्षा र महŒवाकांक्षाभन्दा पनि सरल सौम्य इमानदार सकारात्मक जीवनशैली थियो । जुन संस्कार र शैली नै सामाजिक एकताको मुख्य आधार रहिआएको थियो । तर, आज झाँगिदै गएको नकारात्मक प्रवृत्तिले ती सामाजिक एकताको आधार खलबलिएको छ । सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र संवेदनशीलता हराउँदै गएको छ । यसै अवस्थाबीच हामी समृद्धि र सुखका लागि सामाजिक रूपान्तरण र उद्यमशीलता भन्ने नाराको साथ ४१औं सामाजिक सेवा दिवस पनि आश्विन ६ मा मनाइराखेका छौं । त्यो कसरी पूरा होला ? दुर्भाग्य भनांै, आज हाम्रा संघ र प्रदेशबीच अधिकार खोसाखोस, नागरिक र सरकारबीच दोहरी भनाभन, छ भने स्थानीय जनप्रतिनिधिद्वारा स्थानीय निकायबाट रूपान्तरित भई स्थानीय सरकारको अनुभूति जनतामा पार्न सकेका छैनन् । निजी क्षेत्र प्रक्रियागत झन्झट र कानुनी अस्पष्टताकोे कारण देखाउँदै जनतालाई सेवा दिबाट आफू पन्छिरहेका छन् । गैसस अथवा अन्य संघसंस्था पनि सेवाभन्दा आफ्नै सुखसुविधामा रमाएका देखिन्छन् ।
सामाजिक मूल्यमान्यता पनि स्खलित हुन थालेका पाइन्छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा जीवन नै जोखिममा राखेर जनताको सेवामा खटिरहेका डाक्टर नर्स स्वास्थकर्मीउपर आफ्ना छिमेकी जनबाट भएको अमानवीय अमर्यादित व्यवहार र संक्रमित बिरामीउपरको आफन्त छिमेकी जनबाट भएको अपहेलित, अमर्यादित व्यवहारलाई लिन सकिन्छ, जुन अत्यन्त अमानवीय हो । वास्तवमा हामी आधुनिक युगमा प्रवेश गरे पनि मानवीयता हराउनु हुँदैनथ्यो । यसरी, समाजमा मानवीयता हराउँदै गएको प्रति आत्मसमीक्षा गर्न कोही चाहँदैनन् । नागरिक समाज, सरकार, संघसंस्था, कर्मचारी, सबै आआफ्ना ठाउँमा ठीक, बरु अरूलाँई चाहिँ बेठीक देखाउनमा नै व्यस्त छन् । यति मात्र होइन, संविधानको संरक्षण र पालन गर्ने शपथ खाएका व्यक्ति नै आफूमाथि सविधानले निर्दिष्ट गरेको दायित्वप्रति बेखबरजस्तै देखिन्छन् । संविधानले आगामी अर्थतन्त्रको कार्यदिशा समाजवाद उन्मुख भनेको छ । यस आधारमा हाम्रा आगामी कार्यभार समाजवादका आधारशीला तयार पार्नु हो भन्ने स्पष्ट छ । तर, कस्तो समाजवाद हो ? सोबारे नै स्पष्ट भइसकेका छैनांै ।
जनताका सेवक तथा प्रतिनिधिले समाजका लागि के गर्नु उत्तम हुन्छ, सो गर्नु नै लोकतान्त्रिक गणराज्यको आदर्श मान्यता हो
अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने, सभासम्मेलनमा सहभागी भई विश्वव्यापी एजेन्डाहरू स्वीकार गर्ने तर अक्षरशः पालना नगर्ने, शैली हाम्रो पुरानै हो । आज हामी विश्व शान्ति दिवस र वजन तह बचाउलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरहेको अवस्थामा त्यसतर्फको योजना कार्यक्रमबारे ध्यान पुगिरहेको देखिँदैन । सोहीमध्ये दिगो विकासका लक्ष्यलाई स्वीकार गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले केही वर्षअगाडि एक रिपोर्ट प्रकाशन ग¥यो । सो दिगो विकासका लक्ष्य उद्देश्यअनुरूपका योजना तर्जुमालाई प्राथमिकता दिनेगरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कर्मचारीलाई योजना बनाउन लगाउने र सोबारे जनतालाई सुसूचित गराउन बहस छलफल अन्तक्र्रिया चलाउनु आवश्यक थियो र अझै पनि छ । जसले गर्दा हरेक सूचकको स्थानीयकरण हुन गई लक्ष्य प्राप्ति हुने दिशामा अघि बढ्ने थियो र २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरन्नोति गर्ने लक्ष्यमा सघाउ पुग्ने थियो ।
अहिले सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा अगाडि सारेको छ, यसको परिभाषा योजना कार्यक्रम दायित्व र कार्यविधिबारे अझै प्रस्ट रूपमा आउन सकेको छैन र स्थानीय सरकार यसबारे अन्योलमा छन्् । आज हामी आधुनिकताका नाममा उपभोक्तावादी हँुदै गएका छौं तर समृद्धि समृद्धि भनिरहेका छौं । त्यत्तिकै समृद्धि कसरी आउँछ । वास्तवमा समृद्धि त उत्पादन प्रणालीसँग सरोकार राख्छ । वस्तुको उत्पादन जनता वा क्षेत्रको उत्पादकत्वसँग जोडिन्छ । त्यसैले, उत्पादन र उत्पादकत्वको सहसम्बन्धले मात्र समृद्धि सम्भव हुन सक्छ । यसका लागि कृषिलाई (जल जमिन र जडिबुटी) पहिला प्राथमिकतामा राखी यसका पूर्वाधारतर्फ ध्यान दिइहाल्नुपर्ने अवस्था छ यस्ता तत्काल नगरी नहुने सार्वजनिक हितका काममा आफ्नो ठाउँबाट सोच, चिन्तन, छलफल, बहस चलाउने र सुझाव दिने गर्दैनांै तर अरूलाई होचो अर्गेलो देखाउने काममा चाहिँ तत्कालै खर्च गरिहाल्ने बानी हामीमा छ ।
समाजमा आर्थिक समृद्धि ल्याउने हो भने यो बानी हटाउनु जरुरी छ । यसका लागि नागरिक समाजका हरेकमा सकारात्मक सोचको विकास हुनु जरुरी छ । त्यो कसरी त भन्दा नेपालीमा एउटा उक्ति छ जस्तो अन्न त्यस्तै मन जस्तो मन त्यस्तै तन । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने हामीले खाएको अन्नजस्तो छ । हाम्रो विचार वा मन पनि त्यस्तै हुन्छ । हाम्रो विचार जस्तो बन्छ, त्यस्तै कार्य हुन्छ । कुनै पनि अवस्थाप्रति धेरै दुःखी या चिन्तित नभई त्यसलाई सहज बनाएर मनमा लिनुलाई सकारात्मक सोच हो भन्ने बुझिन्छ । सकरात्मक सोचको प्रतिफल पनि सकरात्मक नै हुन्छ भन्ने आम मान्यता छ । नकारात्मक सोचाइले मनलाई थकाउँछ र शरीरलाई गलाउँछ । यदि तपाईं एक घण्टासम्म मनमा नकारात्मक भाव पैदा गरी बस्नुभयो र पछि आफ्नो शरीरको अवस्था जाच्नुभयो भने त्यस बेला तपाईंको शरीर १२ घण्टाको कडा काम गरेभन्दा बेसी थाकेको हुन्छ भनिन्छ । यसबाट हामी बुझांै कि सकारात्मक सोचको कति महŒव रहेछ । मनमा किन नराम्रो विचार आयो भनी चिन्तन गरी त्यो पत्ता लगाउन सकियो भने मनमा राम्रो विचार भर्न सकिन्छ ।
समस्यालाई सानो देखेर आफूलाई त्यसप्रति ठूलो बनाइयो भने सबैभन्दा सजिलो सकारात्मक हुने उपाय रहन्छ । त्यसैले रोग द्वेष, रिस, घृणा र चिन्ता त्यागेर सबैप्रति सद्भाव राख्दै समाज विकासको गतिलाई अगाडि बढाऔँ । परिवर्तनका संवाहक भनेका नागरिक समाज बुद्धिजीवी पत्रकार राजनीतिक दल नै हुन् । राज्यका सञ्चालक भनेका पनि राजनीतिक दलहरू नै हुन् । कर्मचारी भनेका सरकारले बनाएका नीतिनियमका आधारमा काम गर्ने जनताका सेवक हुन् ।
त्यसैले जनताका सेवक र जनताका प्रतिनिधि मिलेर समाजका लागि केके गर्नुपर्दछ ? कसरी जनताको सेवा हुन सक्तछ ? भन्नेतर्फ सचेत भई तदनुरुप कार्य गर्नु लोकतान्त्रिक गणराज्यको आदर्श मूल्य मान्यता नै हो । केवल चुनाव जित्न चाहिँ सबै जनताले मत हाल्नुपर्ने, पद प्राप्तिपछि सो पदको प्रयोग आफ्नो परिवारको हितका निमित्त मात्र गर्ने प्रवृत्ति हुनुहँुदैन । यही प्रवृत्तिको हाबी हुँदा आज जनतामा राजनीतिक दलहरूप्रति अविश्वास बढ्दै गएको छ । त्यसकारण सरकार र जनता मिली सकारात्मक सोचको साथ समाज विकासमा लागौं ।
Breaking News ओपेन्द्र बस्नेत - October 27, 2020 0
Breaking News राजधानी समाचारदाता - October 20, 2020 0
Uncategorized Dhruba Lamsal - October 24, 2020 0
दाङ । दाङको बंगलाचुली गाउँपालिका २ पाखापानी बस्ने ४५ वर्षीय बालाराम बिकको कुटपिट गरी हत्या गरेको अभियोगमा उनकै छोरा २२ वर्षीय वीर बहादुर बिकलाई...
भर्खरै मधुजंग पाण्डे - October 26, 2020 0
प्रदेश ३ राजधानी समाचारदाता - October 26, 2020 0
पूर्णभक्त दुवाल - March 28, 2020 0
काठमाडौं । रेमिट्यान्सको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेका खाडी मुलुक, अमेरिका, युरोप र भारत कोरोनाको चपेटामा परेपछि रेमिट्यान्स आप्रवाह लगभग ठप्प...
कौशिला कुँवर - May 27, 2020 0
स्विमिङ पुलबिनै पौडी
Not-to-be-missed एजेन्सी - April 21, 2020 0
मस्को । लकडाउनका कारण मानिस घरभित्रै बस्न बाध्य भएका छन् । चलायमान हुनुपर्ने खेलाडी पनि यतिबेला घरभित्र नै अभ्यास गरिरहेका भेटिन्छन् ।...
बिचार प्रेमलकुमार खनाल - August 2, 2020 0
अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन सरकारको अपिल
Editor-Picks सुभाष साह - March 19, 2020 0
काठमाडौं । महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट बच्न सरकारले अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कन र सार्वजनिक स्थलमा २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन अपिल गरेको छ...
नेपालभित्रै पहिलोपटक कोरोना संक्रमित भेटियोे, संक्रमितको संख्या ९ पुग्यो
Uncategorized प्रशान्त वली - April 4, 2020 0
काठमाडौं । नेपालमा नै बस्दै आएका व्यक्तिमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । यसअघि विदेशबाट आएका व्यक्तिमा मात्र कोरोना संक्रमण...
सौजन्य विजया बस्नेत - September 12, 2020 0
भो जाने सपना नदेख अबता छोरी त्यो घर महाँ भन्दैथ्यौं जननी तथापि किन हो बिर्सिएर आए यहाँ मिल्लने त्यो सुखको छमास नहुँदै छोडेर जाँदा पति यो मनको...
बिचार राजधानी समाचारदाता - June 12, 2020 0
Exclusive निराजन पौडेल - October 21, 2020 0
अमेरिकामा एकैदिन अहिलेसम्मकै धेरै सङ्क्रमित
विदेश एजेन्सी । - October 24, 2020 0
इडाहो । अमेरिकामा कोरोनाभाइरसबाट दैनिक सङ्क्रमितहरुको सङ्ख्या अहिलेसम्मकै धेरै देखिएको छ । लकडाउन खुकुलो हुदै गएको, चुनावी गतिविधिहरु बढेको, भिडभाड धेरै हुन थालेको लगायतका कारणले...
कला राजधानी समाचारदाता - October 21, 2020 0
ओपेन्द्र बस्नेत - October 24, 2020
Editor-Picks रासस - October 25, 2020 0